आजको राशिफल ,चैत ३१ गते मङ्गलबार - Baikalpikkhabar
आजको राशिफल ,चैत ३१ गते मङ्गलबार
श्री शालिवाहनीय शाके १९४२ ने. सं. १८४१ वि.सं. २०७७ साल चैत ३१ गते मङ्गलबार, १३ अप्रिल २०२१ । प्रमादि संवत्सर चैत्र शुक्लपक्षको प्रतिपदा तिथि १०ः३० बजेसम्म, उप्रान्त द्वितीया, नक्षत्र प्रतिपदा १४ः३० बजेसम्म, उप्रान्त भरणी, चन्द्रमाराशि कुम्भ, सूर्योदय ५ः४१ र सूर्यास्त ६ः२७ बजे हुनेछ ।
आफन्तसँग मनमुटाव बढ्ला । आफूलाई कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ ।
हर्ष र प्रसन्नताका बीचमा समय व्यतित हुनेछ । सम्पत्ति लाभ गर्ने अनुकूल प्रयास हुनेछन् ।
आज परिश्रमअनुसार उपलब्धि पनि राम्रै पाइनेछ । चिताएको कामले तीव्रता लिनेछ ।
रमाइलो यात्राको सम्भावना छ । त्यसबाट दीर्घकालीन फाइदा हुनेछ । दिन सामान्य छ ।
आफूलाई मन लागेको कुरा खरिद गर्न सकिनेछ । आफन्तले कुनै माध्यमबाट सहयोग गर्नेछन् ।
धार्मिक कार्य र सभा समारोहमा सरिक हुने सम्भावना छ । जटिल ठानिएको कामसमेत पूरा हुनेछ ।
आज लाभदायी यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । परिवारजनको साथले नयाँ आशा पलाउनेछ ।
लाभदायक यात्राको सम्भावना देखिन्छ । एकपछि अर्को अवसर आउने योग परेको छ ।
विवादले गर्दा काम बिग्रनेछ । व्यवसायमा नोक्सानी बेहोर्नु पर्नेछ । शैक्षिक क्षेत्रमा समस्या आउला ।
आज अधिकार प्राप्तिका लागि गरिएको प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ । मिष्ठान्न भोजन प्राप्त हुनेछ ।
अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउनेछ । शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । व्यापारबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ ।
आज शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । रोकिएको काम पनः सुरु हुन सक्छ । धार्मिक यात्रा गर्ने अवसर मिल्ला ।
मङ्गलबार, ३१ चैत, २०७७, बिहानको ०७:५० बजे